घुमाउरो सोफाहरू, बैठक कोठा प्रस्तुत गर्न एक सम्पूर्ण प्रवृत्ति | बेजिया
घुमाउरो सोफाहरू, बैठक कोठा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति
मारिया vazquez | | फर्नीचर, सजावट को चलन
सीधा रेखाहरू र वक्रहरूले सधैं आन्तरिक सजावटमा ध्यानको लागि प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। हालका वर्षहरूमा, घुमाउरो रेखाहरूले प्रतिस्पर्धालाई हराउन काम गरिरहेका छन् र तिनीहरूले बाजी लगाएर त्यसो गरिरहेका छन् जैविक र सिनुस आकारहरू अधिक दृश्यता को लागी। यस प्रवृतिको सबैभन्दा ठूलो विस्तारकहरू घुमाउरो सोफाहरू हुन्।
घुमाउरो सोफाहरू गत वर्ष प्रचलनमा नआएसम्म तिनीहरू प्रख्यात भए र सबै कुराले सन् २०२२ मा तिनीहरू सबै क्रोधित हुनेछन् भन्ने सङ्केत गर्छ। सामान्यतया कम ब्याकरेस्ट र इक्रू टोनमा, यी सोफाहरूलाई क्लासिकदेखि आधुनिकसम्म धेरै फरक शैलीका कोठाहरू सजाउन बोलाइन्छ। । के तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो बैठक कोठाको मुख्य टुक्रा बनाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
1 घुमाउरो सोफा को विशेषताहरु
घुमाउरो सोफा को विशेषताहरु
Jean Royere, Design Piero Lissoni, Vladimir Kagan र Pierre Yovanovich जस्ता डिजाइनरहरू मध्ये केही डिजाइनरहरू हुन् जसले सोफाको यो शैलीलाई लोकप्रिय बनाएका छन्। सजिलो र अधिक तरल कुनै पनि कुराकानीराउन्ड टेबलहरू जस्तै।
चिल्लो रेखाहरू र जमिन माथिको अलिकति उचाइले यी सोफाहरूलाई दिन्छ हल्का र सुरुचिपूर्ण सौंदर्यशास्त्र। तसर्थ, तिनीहरूको साहसको बावजुद, तिनीहरू सबै प्रकारका वातावरणमा अनुकूल हुन्छन्: आधुनिक, रेट्रो, समकालीन वा क्लासिक, तपाईंले छविहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ।
यी सोफाहरूको वक्रताको डिग्री, साथै तिनीहरूको गहिराइ, एक डिजाइनबाट अर्कोमा धेरै फरक हुन्छ। यद्यपि, तिनीहरू सबैमा समान सुविधाहरू छन्। धेरै जसो एक टुक्रा मा बनाइन्छ र तिनीहरू जमिनबाट उठ्छन् साना खुट्टाहरू वा, अधिक सामान्य रूपमा, प्लेटफर्महरूमा धन्यवाद। तपाईं धातु सामग्री वा सोफा अपहोल्स्टर गर्न प्रयोग गरिएको एउटै कपडाले ढाक्न सकिन्छ।
धेरै घुमाउरो सोफाहरू द्वारा साझा गरिएको अर्को विशेषता हो कम पछाडि। यो सोफाको छेउबाट छेउमा चल्न सक्छ वा यसको छेउमा हराउन सक्छ, जस्तै माथिको छविमा धेरै उदाहरणहरूमा। हामी शंका गर्छौं कि यी मध्ये केही backrest सहज हुनेछ; के तपाइँ ती मध्ये एक मा टाउको मार्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको घुमाउरो सोफाको डिजाइन सुविधाहरू जुनसुकै भए पनि, तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि यो बैठक कोठामा फिट हुनेछ यसको व्यक्तित्वको लागि धन्यवाद। एउटा कोठा जसमा गतिशीलता र गहिराई थप्नेछ तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ।
कुनै पनि अन्य सोफा जस्तै घुमाउरो सोफा सामग्री को एक विस्तृत विविधता मा उपलब्ध छन्। केहि डिजाइनहरूमा तपाईंसँग असबाबको सन्दर्भमा अन्तिम शब्द हुनेछ। यद्यपि, यदि तपाइँ आफ्नो नयाँ सोफामा सबै कुरा चाहनुहुन्छ भने बच्चा प्रवृत्ति त्यहाँ दुई सामग्रीहरू छन् जुन तपाईंले विशेष ध्यान दिनुपर्छ:
लूप गरिएको ऊन। बाउकल ऊन एक प्रवृत्ति हो र जारी रहनेछ। यो ऊनले बनेको कपडा हो जसमा अल्पाका फाइबरको सानो लूप हुन्छ, यसको नरम बनावट र विशेषता सानो कर्लको लागि जिम्मेवार हुन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई विभिन्न मोटाई संग पाउन सक्नुहुन्छ; केही यति नरम छन् कि तपाईंले सोफामा बस्दा तिनीहरूले तपाईंलाई ढाकेको महसुस गर्नुहुनेछ। न्यानो र स्वागतयोग्य, यो सामग्रीले यी सोफाहरूको आधुनिक सौन्दर्यतालाई नरम बनाउँछ।
मखमली। मखमली एक प्रवृति होइन तर यो सधैं कुनै पनि कोठा मा लालित्य थप्न एक उत्कृष्ट विकल्प हो। ती सेतो सोफाहरूको लागि ब्लुकल ऊन रिजर्भ गर्नुहोस् र खैरो वा लोकप्रिय रङहरूको छायाहरूमा मखमलसँग हिम्मत गर्नुहोस् जस्तै हामीले तल उल्लेख गर्नेछौं।
यदि हामी प्रचलनहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने, हल्का रंगहरूमा घुमाइएको सोफाहरू नियम। दुबै उज्यालो सेतो टोनमा र, विशेष गरी कच्चा टोनमा यी सोफाहरूले तपाईंको बैठक कोठामा प्रकाश ल्याउनेछन्। प्रवृतिले हामीलाई सिल्हूटलाई प्रमुखता दिन मिल्दो राउन्ड कुसनहरूसँग जोड्न आमन्त्रित गर्दछ, तर यदि तपाइँ सम्पूर्णमा रंग थप्न चाहनुहुन्छ भने, कुसनहरू सधैं त्यसो गर्नको लागि राम्रो विकल्प हो।
तपाईलाई यी हल्का टोनहरू मन पर्दैन? के तपाइँ केहि थप पीडा को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ जुन दिन को दिन को विचारहरु र आगमनहरु लाई सहन्छ? के तपाईं सोफा मार्फत बैठक कोठामा रंग थप्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि त्यहाँ केहि रंगहरू छन् जुन तपाईंले निश्चित रूपमा विचार गर्नुपर्छ। ती रंगहरू छन् नीलो, हरियो र गुलाबी, यस प्रकारको सोफाहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय तर जुन तपाईं आफैलाई सीमित गर्न बाध्य हुनुहुन्न।
के तपाईलाई यस प्रकारको सोफा मन पर्छ? के तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो बैठक कोठामा समावेश गर्नुहुन्छ वा तिनीहरू तपाईंको स्वादको लागि धेरै साहसी छन्? तिनीहरू अझै हाम्रो घरहरूमा धेरै लोकप्रिय छैनन् किनभने त्यहाँ पहुँचयोग्य प्रस्ताव छैन जसले तिनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक बनाउँछ, तर सबै कुरा आउँछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » सजावट को चलन » घुमाउरो सोफाहरू, बैठक कोठा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति
आफ्नो पार्टनरसँग कसरी बहस गर्ने भनेर जान्नको महत्त्व
कम जुत्ता र मोजाहरू, एक प्रवृत्ति जुन फेसनले छोड्दैन